Celebrity – Page 474 – The News Post
(၅)ထောင်တန် အုပ်လိုက်ကိုင်ပြီး လမ်း မှာတွေ့တဲ့ သူ တိုင်း ကို အလှူ ဒါနေ လး ပြုလုပ်ပေးလိုက် တဲ့ ဖြူဖြူထွေး ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်
(၅)ထောင်တန် အုပ်လိုက်ကိုင်ပြီး လမ်း မှာတွေ့တဲ့ သူ တိုင်း ကို အလှူ ဒါနေ လး ပြုလုပ်ပေးလိုက် တဲ့ ဖြူဖြူထွေး ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် ပရိ သတ်အချစ်တော်လေး ဖြူဖြူထွေးကတော့ အောင်မြင်ကျော်ကြား တဲ့ …
July 8, 2020 By admin Celebrity
ယော ကျာ်းကြီးတွေ တန်မဲ့ သူမ ရဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ်ဖြစ်တည်မှု ကို ရစရာမရှိအောင် ဝေဖန်ပြောဆို နေသူတွေကို အရေးယူဆောင်ရွက်မယ့် အကြောင်း ရင်ဖွင့်လာတဲ့ “Mary”
ယော ကျာ်းကြီးတွေ တန်မဲ့ သူမ ရဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ်ဖြစ်တည်မှု ကို ရစရာမရှိအောင် ဝေဖန်ပြောဆို နေသူတွေကို အရေးယူဆောင်ရွက်မယ့် အကြောင်း ရင်ဖွင့်လာတဲ့ “Mary” ညှို့ငင် ဖမ်းစား ထားနိုင်တဲ့အသံလေးနဲ့ သီချင်းတွေကို ကိုယ်တိုင် …
မိ ခင်တောင် ကြားဝင်လို့ မရတဲ့ အထိ တစ်ယောက် ကို တစ်ယောက်အရမ်းချစ်ကြ တဲ့ စိုးမြတ်သူဇာ ၊စိုးမြတ်ကလျာ နဲ့ စိုးမြတ်နန္ဒာ
မိ ခင်တောင် ကြားဝင်လို့ မရတဲ့ အထိ တစ်ယောက် ကို တစ်ယောက်အရမ်းချစ်ကြ တဲ့ စိုးမြတ်သူဇာ ၊စိုးမြတ်ကလျာ နဲ့ စိုးမြတ်နန္ဒာ ပရိ သတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်တွေဖြစ်တဲ့ စိုးမြတ်သူဇာ၊ စိုးမြတ်ကလျာ၊ စိုးမြတ်နန္ဒာတို့ မင်းသမီး …
ကို ရိုနာဗိုင်းရပ်စ်​ကြောင့် ​ကြွေလွင့်ခဲ့ရပြီဖြစ် တဲ့ မင်းသားကြီးတ စ်ဦး
ကို ရိုနာဗိုင်းရပ်စ်​ကြောင့် ​ကြွေလွင့်ခဲ့ရပြီဖြစ် တဲ့ မင်းသားကြီးတ စ်ဦး “Bullets Over Broadway” ရုပ်ရှင်မ င်းသား နစ်ကော်ဒီရိုဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကြောင့် တနင်္ဂနွေနေ့ အသက် ၄၁ နှစ် အရွယ်မှာတင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရကြောင်း သူ့ဇနီး …
အ လုပ်တွေနားထား လို့ စီးပွားရေးအဆင်မပြေတဲ့အကြောင်း ဝမ်းနည်း စွာပြောလာ တဲ့ ဒိန်းဒေါင် .
အ လုပ်တွေနားထား လို့ စီးပွားရေးအဆင်မပြေတဲ့အကြောင်း ဝမ်းနည်း စွာပြောလာ တဲ့ ဒိန်းဒေါင် . ပရိသတ်ကြီးအတွက်ဘဝအမောတွေကို ပြေပျောက်စေဖို့ဟာသလေးတွေနဲ့တင်ဆက်ပေး သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဟာသလူရွှင်တော်ဒိန်းဒေါင်ကိုတော့ပရိသတ်လည်းရင်နှီးပြီး သားဖြစ် မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်းပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင် တဲ့ဇာတ် ပို့ ဇာတ်ရွတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဗီဒီယိုဇာတ်ကားပေါင်းများစွာနဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာလည်း …
မြန်မာ အကကို အပီအပြင် ကပြနေ တဲ့ အမေ့ ကို အခွီတွေပြောပြီး ဆေးထိုး စ နောက်လိုက်တဲ့ “ဖြူဖြူထွေး”
မြန်မာ အကကို အပီအပြင် ကပြနေ တဲ့ အမေ့ ကို အခွီတွေပြောပြီး ဆေးထိုး စ နောက်လိုက်တဲ့ “ဖြူဖြူထွေး” မင်းသ မီးချောလေး ဖြူဖြူထွေး ကတော့ ဟန်ဆောင်မှု ကင်းပြီး ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ တကယ့် …
ငယ် ငယ် အပျိုဘဝတုန်းက လျို့ဝှက်ချက်လေးတွေ ကို ထုတ်ဖော်ပြသလိုက် တဲ့ စိုးမြတ်နန္ဒာ
ငယ် ငယ် အပျိုဘဝတုန်းက လျို့ဝှက်ချက်လေးတွေ ကို ထုတ်ဖော်ပြသလိုက် တဲ့ စိုးမြတ်နန္ဒာ အခုချိန်ထိတိုင် ငယ်ရုပ်လေးမပျောက်သွားဘဲ ပန်းလေးတစ်ပွင့်လို နုနယ်လှပနေတဲ့ စိုးမြတ်နန္ဒာ စိုးမြတ်သူ ဇာ၊စိုးမြတ်ကလျာ၊စိုးမြတ်နန္ဒာတို့ ညီအစ်မသုံးယောက်ဟာဆိုရင် တစ်ခေတ်ကတည်းက အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာလျှောက်လှမ်းလာခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ မကြီးစိုးသာလျှင် အနုပညာအလုပ်တွေကို …
နေဒွေး နဲ့ ချစ်သူေ တွ ဖြစ်နေကြောင်း တရား ဝင်ချ ပြလာ တဲ့ TikTok ဆယ် လီ မေ လး Htang Ra ပ ရိသတ်ကြီးရေ လက်ရှိ မှာတော့ …
July 7, 2020 By admin Celebrity
ဝတာ ကို ဗိုက်ကြီးနေတယ် လို့ ထင်နေသူတွေ ကို ပြန်လ ည် တု န့်ပြန်လိုက် တဲ့ အိမ့်ချစ်
ဝတာ ကို ဗိုက်ကြီးနေတယ် လို့ ထင်နေသူတွေ ကို ပြန်လ ည် တု န့်ပြန်လိုက် တဲ့ အိမ့်ချစ် မကြာသေး ခင်အချိန်အတွင်းက ပူပူနွေးနွေးလက်ထပ်ထားတဲ့စုံတွဲတွေထဲမှာတော့ အိမ့်ချစ်တို့စုံတွဲလည်းအပါအဝင်ပါ။ အိမ့်ချစ်ကတော့ အသံချိုချိုလေးနဲ့ပရိသတ်အကြိုက်တေးသီချင်းကောင်းတွေကို သီဆိုလေ့ရှိသူဖြစ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တွေကို …
မေသန်းနု နဲ့အတူ စိန် အရောင်းအဝယ်တွေလုပ် တု န်းက တစ်လ ကို သိန်း(၁၀၀၀)ဖိုးလော က်ရောင်းခဲ့ရကြောင်း ပြောပြခဲ့တဲ့ စုရှိုင်း
မေသန်းနု နဲ့အတူ စိန် အရောင်းအဝယ်တွေလုပ် တု န်းက တစ်လ ကို သိန်း(၁၀၀၀)ဖိုးလော က်ရောင်းခဲ့ရကြောင်း ပြောပြခဲ့တဲ့ စုရှိုင်း အနု ပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေအခိုင်အမာနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို သိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီမင်းသမီးချော …